August 3, 2019 - Myitter
August 3, 2019 Myitter 0
တစ်ချိန်က လက်ဝှေ့ဆိုင်းသံ ကြားရာအရပ်တိုင်းမှာ သူ့ကို တွေ့ရတတ်ပါသည်။ ခုတော့ သူ…၊ ကြိုးဝိုင်းကို ကျောခိုင်းလိုက်ပါပြီ။ ဒဏ်ချက်များဖြင့် ရင့်ကျက်နေသော သူ့မျက်နှာသည် ကြိုးဝိုင်းထဲ၌ မာထန်သလောက် အပြင်တွင် ပုခက်တွင်းက ကလေးငယ်တစ်ယောက်၏ ဖြူစင်သော အပြုံးမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ ပွင့်လင်းရာသီရောက်လို့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် လက်ဝှေ့ဗိန်းမောင်းသံ ကြားတိုင်း ကြိုးဝိုင်းကို […]
“ကျောက်​ကပ်​တစ်​လုံး” ​ပျော်​ကျသွားပြီး . .ဆေးဆက်ကုဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ ဆရာလေး
ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီနိုင်​သူများ သိရှိ​စေရန်​ ဝိုင်းရှဲ​ပေးကြပါရှင်​ ဆရာ​လေးတစ်​ပါး ရန်​ကုန်​မြို့ရှိ ကုတင်​၅၀၀​​ဆေးရုံရဲ့ ဆီးနှင့်​​ကျောက်​ကပ်​ အ​ရေး​ပေါ်ခန်းမှာ ​ဝေဒနာခံစား​နေရင်း ​ဆေးကုသခံယူ​နေပါတယ်​ ပထမအစမှာတုန်းက ရန်​ကုန်​ Sakura အထူးကု​ဆေးရုံမှာ​ ​ဆေးကုသမှု့ ခံယူခဲ့ပါတယ်​ခုအခါ ​ငွေ​ကြေးမတတ်​နိုင်​​တော့သည့်​အတွက်​ ကုတင်​၅၀၀ကို ​လွှဲ​ပြောင်း​ရောက်​ရှိခဲ့ခြင်းပါ ထားဝယ်​ကလည်းဖြစ်ပြန်​ မိဘ​တွေလည်း မရှိကြ​တော့ဘူးလို့သိခဲ့ရပါတယ်​ ညီမနှစ်​​ယောက်​မှာလည်း […]
ဒီအထုပ်လေးတွေကိုတွေ့ရင် လွှင့်မပစ်ကြနဲ့နော် (Silica Gel Bags)တွေကိုဘာလို့ လွှင့်မပစ်သင့်တာလဲ မုန့်ဘူးတွေ ကင်မရာဘူးတွေ ဖိနပ်ဘူးတွေထဲမှာ (Silica Gel Bags) လို့ခေါ်တဲ့ ဂျယ်လီလို အလုံးလေးတွေ အစေ့လေးတွေ ပါတဲ့ အိတ်လေးကို တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဒီအထုပ်လေးတွေကို တွေ့တာနဲ့ အသုံးမလိုလောက်ဘူး အန္တရာယ်ရှိမလားမသိဘူးဆိုပြီး လွှင့်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာတော့ ဒီအိတ်လေးတွေက […]
မန္တလေးတွင် မျက်နှာဖုံးစွပ် ဓားပြ (၆) ယောက်ဖမ်းမိ၊ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် ကလေး ၁ ဦးပါဝင်
မန္တလေးတွင် မျက်နှာဖုံးစွပ် ဓားပြ (၆) ယောက်ဖမ်းမိ၊ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် ကလေး ၁ ဦးပါဝင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်တွင် ဓားပြမှုကျူးလွန်ခဲ့သူ ခြောက်ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့က သြဂုတ် ၂ ရက်တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ အဆိုပါနေ့ နံနက် ၁ နာရီခွဲခန့်တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် […]
” မြန်မာ့လက်ဝှေ့ ထိုင်းမွေထိုင်းထက် ပိုပြီး ရှေးကျတယ်၊ပိုပြီး ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာကို သက်သေပြဖို့ ထိုင်းချန်ပီယံတစ်ယောက်ကို စိန်ခေါ်ချင်ပါတယ်”
” ကျွန်တော် မြန်မာဆိုတာ ပြောစရာတောင် မလိုတော့ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် မြန်မာ့လက်ဝှေ့ ထိုင်းမွေထိုင်းထက် ပိုပြီး ရှေးကျတယ်၊ပိုပြီး ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာကို သက်သေပြဖို့ ထိုင်းချန်ပီယံတစ်ယောက်ကို စိန်ခေါ်ချင်ပါတယ်” …… DuwunSportsVideo မြန်​မာ့ရိုးရာလက်​​ဝှေ့ကစားသမား​တွေထဲမှာ ဝင်းထွန်းကိုအကြိုက်​ဆုံးပဲလို့ ​ဒေ့ဗ်​လက်​ဒုက ​ပြောပါတယ်​။ ဝင်းထွန်း (လယ်​/ဆည်​) ဟာ မြန်​မာ့ရိုးရာလက်​​ဝှေ့ချန်​ပီယံခါးပတ်​ကို ​လေးထပ်​ကွမ်းဆွတ်​ခူးနိုင်​ခဲ့သူပါ။ […]
ဒုတိယအချီမှာ ဘက်ဇင်စကီးကို အလဲထိုးအနိုင်ယူပြီး WLC ရဲ့ခရူဇာဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံခါးပတ်ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ ဒေ့ဗ်
WLC-9: King of Nine limbs လက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲရဲ့ ခေါင်ပွဲဖြစ်ပြီး ခရူဇာဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံခါးပတ်လုပွဲအဖြစ်ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ ဒေ့ဗ်လက်ဒု (ကနေဒါ) နဲ့ UFC တိုက်ခိုက်ရေးသမားဟောင်း ဆက်သ်ဘက်စင်စကီး (အမေရိကန်) တို့ ပွဲစဉ်မှာတော့ ဒေ့ဗ်က (၂) ချီတည်းနဲ့ အလဲထိုးအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ ပထမအချီမှာ ဒေ့ဗ်ရဲ့ ဖြတ်နင်းမှုကြောင့် […]
“ဒီဘ၀တော့ ဒီမျှနဲ့ ဝေးပါစို့”ဆိုပြီး ရတနာပုံ တံတားပေါ်မှ ဧရာဝတီမြစ်ထဲ ခုန်ချသွားတဲ့ လူငယ်လေး
“သေရမှာ ကြောက်ပေမယ့် မင်းမရှိဘဲ နေရမှာ ပိုကြောက်တယ်” ဆိုပြီး ဧရာဝတီမြစ်ထဲ ခုန်ချသွားတဲ့ လူငယ်လေး ဧရာဝတီတံတား ရတနာပုံ စစ်ကိုင်းဘက်ခြမ်းတွင် အမျိုးသားတစ်ဦးခုန်ချမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် ဧရာဝတီတံတား ရတနာပုံ စစ်ကိုင်းဘက်ခြမ်းတွင် အမျိုးသားတစ်ဦးခုန်ချမှုဖြစ်ပွားသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ စစ်ကိုင်း ခရိုင်/မြို့နယ်၊ SERT RESCUE ၊ သုခကာရီ RESCUE […]
၇ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လအတွက် တစ်လတာဟောစာတမ်းလာပါပြီ….
၇ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လအတွက် တစ်လတာဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ မြေကိစ္စအဆင်ပြေအောင်မြင်မည်။ရပ်ဝေးမှာသင်းကောင်းကြားရတတ်သည်။မိတ်ဆွေများ၏ကူညီမှုရရှိမည်။စပ်တူလုပ်ငန်းများလုပ်ရကိန်းရှိပါတယ်။ပညာရေး အဆင်ပြေခြင်း၊သင်တန်းတက်ရခြင်း၊ဆရာသမားလို ပုဂ္ဂိုလ်များကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရတတ်ပါသည်။ ရွှေလက်ကောက်ရှိလျှင်ထွက်တတ်ပါသည်။အလုပ်များ၍စိတ်များရှုပ်နေရတတ်ပါမည်။ဗုဒ္ဓဟူး ၊စနေသားသမီး ကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်များ ကြုံရတတ်ပါသည်။ဗုဒ္ဒဟူး၊စနေသားသမီးလက်အောက်ငယ်သား၊အလုပ်သမားများရှိလျှင်ထွက်သွားတတ်ပါတယ်။စက်ပစ္စည်း၊ကား၊ဖုန်း၊ မြေဝင်ကိန်း ရှိပါသည်။ ငွေကတော့အဝင်ကြမ်းအထွက်ကြမ်းဖြစ်နေတတ်ပါသည်။လုပ်ငန်းကောင်းပါသည်။အလုပ်များလို့ပင်ပန်းနေမည်။လူအများနှင့်လုပ်ရသောလုပ်ငန်းများရက်ချိန်းများ ကြံကြာခြင်းချိန်းထားသောရက်မပေးနိုင်ခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရှိသူများအိမ်ထောင်ဘက်နှင့်ပတ်သက်၍စိတ်ရှုပ်ရတတ်ပါသည်။ခရီးထွက်မည်ထွက်မည်ဆိုပြီးခရီးရက်ရွှေ့ရခြင်း၊ကြံကြာခြင်းများကြုံရတတ်ပါသည်။သူများအမှုအခင်းပြဿနာများကို အကြံပေးဖြေရှင်းပေးရတတ်ပါသည်။ချစ်သူသမီးရည်းစားများအနေနဲ့အချစ်ရေးကံညံ့တတ်သည်။မကောင်းအဖျက်အေ နှက်ယှက်ကြောင့်ချစ်သူနှင့် ဝေးကွာရတတ်သည်။ချစ်သူ၏ဂရုမစိုက်ခြင်းကိုခံရတတ်ပါသည်။ချစ်သူမရှိသေးသူများအချစ်သစ်တွေ့တတ်ပါသည်။ ယတြာ – ဘုရားမှာတံခွန်(၉)လက်လှူပေးပါ။ဘာသာရေးလုပ်တတ်သူများဂုဏ်တော် ၉ […]
စင်ကာပူဆရာဝန် ဆေးစစ်ချက်တွေအရ အသဲကင်ဆာ အဆင့် (၄) ဆေးရုံ က ( ၆ )လ ပဲ နေရတော့မယ်ဆိုတဲ့ သူ ယခုအကုန်ပျောက်ပြီဟု မှတ်လိုက်ပါပြီ
အသဲ ကင်ဆာ အဆင့် (၄)… ပေးပို့ သူ… Saw Nandar ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၅ လပိုင်းမှာ အသဲကင်ဆာ ဖြစ်နေမှန်း စ သိရပါတယ် ။ စင်ကာပူမှာ အသားစ စစ်ဆေးပြီး အဆုတ်နဲ့ အရိုးကို ပြန့်နေလို့ အသဲအစားထိုးရင်လဲ ၅၀% […]